Dhagayso:- Puntland shirka Somalia iyo Somaliland Natijada kasobaxday ma aqonsandona - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulahi Cumar (Camey) ayaa ka hadlay Go’aan ka ay ka taaganyihiin wadahadalada Dowlada Federaalka iyo Somaliland uga socda Turkey.
C/xakiin Cumar Cameey ayaa ku celiyay in dowlada puntland ay ka taagan tahay go’aan adag shirka u dhexeeya Somaliland iyo Somaliya, isagoos heegay in aanu noqon doonin shirkaas mid dhameystiran hadii aan dowlada Puntland goob joog ka heyn, waxyaabihii ka soobaxana ay noqonayaan kuwo aan waxba ka jirin.
HALKAN KA DHAGEYSO CODKA CABDIXAKIIM (CAMEY)
Waxa uu madaxweyne ku xigeenku sheegay in wadahadalkii dowlada federaalka iyo Puntland ay ku wada galeen Garoowe dhowaan uu ku jiray qodobkan ku aadan wada hadalka labada dhinac ayna tahay in loo fuliyo sidii looga wada hadlay.
“Shirkaas hadii uusan noqonin shir soomaali ay ku wada hadasho ma noqon doono mid tamar gal ah, wuxuu noqon doonaa ama u ekaanayaa shir beeleed” waxaa hadaladasi ay kamid ahaayeen hadalada madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng Cameey.
Sikastaba ha ahaatee ku celinta mowqifka arintaas ku aadan ee Puntland waxa uu imanayaa xili uu socdo shirka wada hadalka dowlada federaalka SOomaaliya iyo Soomaaliland kaas oo wafuud ka kala socota labada dhinac u furmay.
Somalia: Somali Jihadist fighting for ISIS killed in Iraq